လီဗာပူးကို နိုင်ဖို့ နည်းမရှိပေမယ့် နိုင်ချင်ရင် မန်ယူလူစာရင်းတွင် မဖြစ်မနေထည့်ရမယ့်ကစားသမားက ဘယ်သူလဲ? – Play Maker Sports Journal
လီဗာပူးကို နိုင်ဖို့ နည်းမရှိပေမယ့် နိုင်ချင်ရင် မန်ယူလူစာရင်းတွင် မဖြစ်မနေထည့်ရမယ့်ကစားသမားက ဘယ်သူလဲ?
ယနေ့ညအိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာကစားမယ့်မန်ယူနှင့်လီဗာပူးတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုအားလုံး စိတ်ဝင်စားစရာစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ယနေ့ညပွဲစဉ်တွင်မန်ယူအတွက်လိုအပ်တဲ့ပွဲအဖြေကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဆောင်မယ့်သူအဖြစ်ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုနှင့်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်လို့ ပရိသတ်များနှင့်ဘောလုံးဝေဖန်သုံးသပ်သူများကယုံကြည်နေကြပါတယ်။
Sky Sport ရဲ့ဘောလုံးဝေဖန်သုံးသပ်သူပေါလ်မာဆင်က “သူတို့(မန်ယူ)အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့လိုတယ်။သူတို့ဟာပြိုင်ဘက်ကိုအနီးကပ်လိုက်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လီဗာပူးကိုကြည့်လိုက်ပါ။သူတို့ဟာအလုပ်အရမ်းကြိုးစားလို့အမြင့်ပျံနေတာပါ။ယူနိုက်တက်လား။သူတို့ကအလုပ်သိပ်မကြိုးစားပါဘူး။သူတို့ကိုရင်ဆိုင်ရတာလွယ်ပါတယ်။လက်ရှိမန်ယူအသင်းကစားတာကြည့်ရတာမကောင်းပါဘူး။သူတို့လီဗာပူးကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲ။ကျွန်တော်တော့တွေးလို့တောင်မရပါဘူး။ဒါပေမယ့်အနိုင်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့အသင်းလူစာရင်းမှာပထမဆုံးထည့်သွင်းရမယ့်သူကတော့စကော့မက်တိုမီနေးပါ။မန်ယူမှာသူ့လိုကစားသမားမျိုးအလုံအလောက်မရှိပါဘူး။ဒီအတိုင်းသွားရင်တော့ဆိုးလ်ရှားလည်းဒီရာထူးကိုကြာကြာထိန်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး”လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။
လီဗာပူးကို ႏိုင္ဖို႔ နည္းမရွိေပမယ့္ ႏိုင္ခ်င္ရင္ မန္ယူလူစာရင္းတြင္ မျဖစ္မေနထည့္ရမယ့္ကစားသမားက ဘယ္သူလဲ?
ယေန႔ညအိုးထရက္ဖို႔ဒ္မွာကစားမယ့္မန္ယူႏွင့္လီဗာပူးတို႔ရဲ႕ပြဲစဥ္ကိုအားလုံး စိတ္ဝင္စားစရာေစာင့္ဆိုင္းေနၾကပါတယ္။ယေန႔ညပြဲစဥ္တြင္မန္ယူအတြက္လိုအပ္တဲ့ပြဲအေျဖကိုေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ေဆာင္မယ့္သူအျဖစ္ခရစၥတီယာႏိုေရာ္နယ္ဒိုႏွင့္ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္လို႔ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ေဘာလုံးေဝဖန္သုံးသပ္သူမ်ားကယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။
Sky Sport ရဲ႕ေဘာလုံးေဝဖန္သုံးသပ္သူေပါလ္မာဆင္က “သူတို႔(မန္ယူ)အနည္းငယ္အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔လိုတယ္။သူတို႔ဟာၿပိဳင္ဘက္ကိုအနီးကပ္လိုက္ကစားႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။လီဗာပူးကိုၾကည့္လိုက္ပါ။သူတို႔ဟာအလုပ္အရမ္းႀကိဳးစားလို႔အျမင့္ပ်ံေနတာပါ။ယူႏိုက္တက္လား။သူတို႔ကအလုပ္သိပ္မႀကိဳးစားပါဘူး။သူတို႔ကိုရင္ဆိုင္ရတာလြယ္ပါတယ္။လက္ရွိမန္ယူအသင္းကစားတာၾကည့္ရတာမေကာင္းပါဘူး။သူတို႔လီဗာပူးကိုဘယ္လိုအႏိုင္ယူမလဲ။ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ေတြးလို႔ေတာင္မရပါဘူး။ဒါေပမယ့္အႏိုင္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့အသင္းလူစာရင္းမွာပထမဆုံးထည့္သြင္းရမယ့္သူကေတာ့စေကာ့မက္တိုမီေနးပါ။မန္ယူမွာသူ႔လိုကစားသမားမ်ိဳးအလုံအေလာက္မရွိပါဘူး။ဒီအတိုင္းသြားရင္ေတာ့ဆိုးလ္ရွားလည္းဒီရာထူးကိုၾကာၾကာထိန္းထားႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး”လို႔ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
ခံစစ်မှူးဂျူးစ်ခွန်ဒီကို ပေါချောင်ကောင်းနှိုက်လို့ ရမည်မဟုတ်ဟု ချဲလ်ဆီးကို ဆီဗီလာသတိပေး
ပေါင်ခြံဒဏ်ရာမှပြန်လည်သက်သာကာ ဗာရိန်း လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနိုင်ပြီ